Ogaden News Agency (ONA) – John Kerry oo booqan doona Itobiya, kala hadli doona Shirweynaha AU Xuquuqda Aadanaha
John Kerry oo booqan doona Itobiya, kala hadli doona Shirweynaha AU Xuquuqda Aadanaha
Posted by ONA Admin	/ April 21, 2013
Xoghayaha Arimaha Dibadda Mareykanka ayaa sheegay inuu ka qaybgali doono xuska sanadguurada Midowga Afrika oo lagu qabanayo Xarunta MA ee Adisababa. Dawladda Mareykanka ayaa doonaysa inay dib ugu soo laabato Afrika oo sanadihii la soo dhaafay ay ka sii jeeday taasoo dhalisay in dalalka ay ka midka yihiin Shiinaha iyoIran ay lugaha la galaan. Socdaalka Xoghayaha AD Mr. John Kerry ayaa lagu tilmaamay inay arimahaa ka dambeeyaan.
Xoghaya AD isagoo u waramaya Aqalka Sharci-dajinta (Lawmakers) ayuu sheegay inuu ka walaacsan yahay Shiinaha oo nufuudkii uu ku lahaa Afrika ay sii kordhayso iyo socdaalkii uu 3ex dal oo Afrika ah uu M/Weynaha Iran Axmad Najaad ku soo maray taasoo uu ku tilmaamay inay tahay dhiila cusub oo soo korodhay.
Mr. Kerry isagoo u waramaya Aqalka Odayaasha ee Senate-ka wuxuu yidhi;; ” Shiinaha ayaa dhaafay Mareykanka xagga maal-gashiga Afrika hadda”.
Wuxuu Mareykanka ka walwal qabaa habka ay dawladaha ay ka midka yihiin Shiinaha iyoIran adeegsanayaan markay la tacaamulayaan Afrika, taasoo uu ku tilmaamay Xoghayaha Arimaha Dibadda ee Mareykanka inay tahay arin aan haboonayn.
Isagoo aan dalna magacaabin ayuu Xoghaya AD sheegay inay jiraan dawlado bixiya laaluush ay siiyaan madaxda Afrika, taasoo ka soo horjeeda qaanuunka tartanka baayac-mushtarka. Waxaa intaa dheer iyadoo dawladahaasi aanay aqoonsanayn wax la yidhaahdo Xuquuqul Insaanka taasoo u sahlaysa inay la tacaamulaan xukuumadaha aan xeerinin xuquuqda aadanaha sida dawlada Itobiya.
Xoghaya Arimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sii sheegay inuu kala hadli doono dawladaha ay ka midka tahay Itobiya daryeelka xuquuqul insaanka iyo ku dhaqanka sharciga.
Midowga Afrika (AU) oo waagii hore la odhan jiray Ururka Midowga Afrika (OAU) ayaa bisha soo socota loo dabaaldagayaa 50-guuradii asaaskii ururkaa.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLF) ayaa u gudbin doona shirkaa warqad ka xogwaramaysa dhibaatada lagu hayo shacabka S.Ogadenya iyo in xeerka loo dajiyay xuduudaha dawladaha Afrika ee dhigaya in siduu uga tagay isticmaarkii Yurub loo daayo ay ka duwan tahay Qadiyadda Ogadenya, maadaama Itobiya ay ahayd dawladda kali ah ee Afrikaanka ah ee ka qayb qaadatay gumaysigii shucuubta Afrika, taasoo ka dhigaysa Ogadenya dal Afrika ah oo ku hadhay Gumaysiga.